Fanaovantsoa nampidi-doza :: Lehilahy notsindronin’ny olona niantrany tamin’ny antsy • AoRaha
Fanaovantsoa nampidi-doza Lehilahy notsindronin’ny olona niantrany tamin’ny antsy
Mananjina ny ra latsaka. Tratra ihany ny lehilahy iray voarohirohy ho namono nahafaty tamin’ny tsindron’antsy ny lehilahy iray teny Andavamamba Anatihazo II, tamin’ ny 28 janoary lasa teo. Mamo ny lehilahy iray ka
niangavy tamin’ilay lehilahy iray hafa ny hanatitra azy any an-trano, ny alin’ny 28 janoary io. Rehefa tonga tany anefa dia tsindron’antsy no nahazo an’io mpanatitra io sady niafara tamin’ny fahafatesany.
“Rehefa tonga tany an-tranony ny lehilahy mamo naterina dia nangataka sigara tamin’ity lehilahy
niangaviany hanatitra azy. Tsy nanana anefa ilay nanatitra ka tezitra mafy io lehilahy mamo io. Naka antsy izy dia notsatohany indimy ilay niantra azy, ka nitambotsotra tamin’ny tany ary namoy ny ainy teo no ho eo”, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana.
Rehefa nosavaina ny tranon’ilay lehilahy voampanga dia nahitana ra betsaka very tamin’ny tany. Raha tsy misy ny fiovana dia hatolotra ny Fitsarana, anio, io lehilahy 42 taona mamo voampanga ho namono nahafaty ny olona niantra azy io.
Fahatsiarovana tsingerin-taona Latsa-dranomaso teny an-tsehatra i Mialy Rakotomamonjy
Vokatry ny andro ratsy Mpiandry omby roa lahy maty nihotsahan’ny tany
Fifampitifirana mahery vaika Matin’ny dahalo ny miaramila iray ao amin’ny Tafika
Kaominina Antananarivo renivohitra Nandray ny asany ireo lehiben’ny Polisy kaominaly sy ny mpamonjy voina vaovao
Sehatra hainahandro :: Ho hita amin’ny toeram-pivarotana maro ny sakafo vokatra Cook It
Asan-dahalo :: Mpirahalahy maty voatifitry